Izay mino sy hatao batisa no ho vonjena; fa izay tsy mino no hohelohina.
Dia hoy i Petera tamin’izy ireo, Mibebaha, ary aoka ianareo rehetra samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy ho famelàna ny heloka, ary ianareo handray ny fanomezan’ny Fanahy Masina.
Miharihary, fa zava-dehibe ny batisa, saingy mampaninona ve hoe toy ny ahoana no nanaovana batisa antsika? Misy ve ny batisa marina anankiray, sa ny zavatra rehetra dia mety avokoa? Raha mino ny Baiboly ianareo, dia ENY, misy ny batisa marina anankiray.
Ny ankabiazan’ny fiangonana dia manao batisa amin’ny Anaran’ny Ray, Zanaka, ary Fanahy Masina, saingy tsy marina izany araka ny Baiboly.
Ao amin’ny Asa 19, dia nisy vahoaka iray izay efa nino an’i Jesosy Kristy, saingy tsy mbola nandray ny Fanahy Masina tao am-pony. Ny apostoly Paoly dia nahafantatra ny fomba marina handraisana ny Fanahy Masina, koa nanontany azy ireo izy hoe, “Ho amin’ny inona àry no nanaovana batisa anareo?” Dia hoy izy ireo hoe, “Ho amin’ny batisan’i Jaona.” (Asa 19:3) Hitan’i Paoly fa tsy natao batisa araka ny didin’i Petera izy ireo ao amin’ny Asa 2:38, koa dia nampianatra azy ireo izy mba hatao batisa indray amin’ny Anaran’ny Tompo Jesosy. Avy eo, araka ny nampanantenaina, dia nandray ny Fanahy Masina izy ireo.
Noho izany, nahoana ireo mpianatra no nanao batisa tamin’ny Anaran’i Jesosy nefa Jesosy, Izy tenany, no niteny tamin’izy ireo mba hanao batisa amin’ny Anarana (fa tsy “ireo anarana”) an’ny Ray, sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina? (Mat 28:19) Nanao fahadisoana iray ve izy ireo? Tsia! Tena nanao tanteraka araka ny nampianarina azy izy ireo.
Raha mamaky an’ity lahatsoratra ity ianareo, dia eritrereto ny amin’ny anaranareo. Zanaka iray ve ianareo? Ny anaranareo ve dia, “Zanaka”? Reny iray ve ianareo? Ny anaranareo ve dia, “Reny”? Mazava ho azy fa tsia, titra fotsiny ihany ireo. Manana anarana iray tena izy ianareo, ary toy izany koa Andriamanitra.
Indro ilay valiny:
Ary tsy misy zavatra tahaka an’izany ao amin’ny Baiboly hoe mba nisy olona iray natao batisa tamin’ny anaran’ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina; satria tsy misy ny zavatra tahaka an’izany. Tsy anarana ny Ray; ary tsy anarana ny Zanaka; ary tsy anarana ny Fanahy Masina; fa ny Anaran’ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina dia ny Tompo Jesosy Kristy.
Jesosy Kristy no Andriamanitra! Izy no Ray, ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina.
Raha mikatsaka ny Fanahy Masina ianareo ka manontany tena hoe nahoana ny Tompo no tsy mbola nanome an’izany ho anareo, amin’izay fotoana izay ianareo dia tokony hanontany ny tenanareo amin’ilay fanontaniana mitovy amin’izay nanontanian’i Paoly hoe, “Ho amin’ny inona àry no nanaovana batisa anareo?”
Koa mandehana ianareo, ary ampianaro ny firenena rehetra, manao batisa azy amin’ny anaran’ny Ray, sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina:
[Iza no Anaran’ny Ray? Anaran’ny Zanaka? Anaran’ny Fanahy Masina?]
Izaho dia avy amin’ny anaran’ny Raiko, fa ianareo tsy nandray ahy: raha misy hafa avy amin’ny anarany manokana, dia ho raisinareo izy.
[Raha avy amin’ny Anaran’ny Rainy Izy, iza àry no Anarany?]
Izaho sy ny Raiko dia iray ihany.
Hoy i Filipo taminy, Tompo, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay.
Hoy Jesosy taminy, Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka mbola tsy fantatrao ihany ve aho, ry Filipo? izay nahita ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no itenenanareo hoe, Asehoy anay ny Ray?
Dia hoy izy tamin’i Tomasy, Ahinjiro manketo ny rantsan-tànanao, ary jereo ny tànako; ary ahinjiro manketo ny tànanao, ary atehefo eto amin’ny lanivohoko izany: ary aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa.
Dia namaly i Tomasy ka nanao taminy hoe, Tompoko sy Andriamanitro.
Dia hoy i Petera tamin’izy ireo, Mibebaha, ary aoka ianareo rehetra samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy ho an’ny famelàn-heloka, ary ianareo handray ny fanomezan’ny Fanahy Masina.
Fa ny teny fikasana dia ho anareo, sy ho an’ny zanakareo, ary ho an’ireo rehetra izay lavitra, na iza na iza hantsoin’ny Tompo Andriamanitsika.
Tsy misy famonjena avy amin’ny hafa na iza na iza: satria tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona, izay hahavonjy antsika.
Nefa rehefa nino an’i Filipo nitory an’ireo zavatra mikasika ny fanjakan’Andriamanitra izy ireo, sy ny anaran’i Jesosy Kristy, dia natao batisa izy ireo, na ny lehilahy na ny vehivavy.
Dia hoy izy tamin’izy ireo, Ho amin’ny inona àry no nanaovana batisa anareo? Ary hoy izy ireo, Ho amin’ny batisan’i Jaona.
Dia hoy i Paoly, Jaona dia nanao marina tokoa ny batisan’ny fibebahana, nilaza tamin’ny olona, mba hinoan’izy ireo an’izay ho avy manaraka azy, izany hoe, Jesosy Kristy.
Rehefa nahare an’izany izy ireo, dia natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy Kristy izy ireo.
Ary rehefa nametra-tànana tamin’izy ireo i Paoly, dia tonga tamin’izy ireo ny Fanahy Masina; ary niteny tamin’ny fiteny tsy fantatra izy ireo, sady naminany.
Ary na inona na inona ataonareo amin’ny teny na amin’ny asa, dia ataovy amin’ny anaran’ny Tompo Jesosy, izany rehetra izany, misaotra an’Andriamanitra sy ny Ray amin’ny alàlany.
I Jaona 5:7
Fa misy telo izay manambara any an-danitra, dia ny Ray, ny Teny, ary ny Fanahy Masina: ary ireo telo ireo dia iray.